Arag sawirro: Weerar argagixiso oo ka dhan ah Soomaalida oo ka dhacay London - Caasimada Online
Home Warar Arag sawirro: Weerar argagixiso oo ka dhan ah Soomaalida oo ka dhacay...
Arag sawirro: Weerar argagixiso oo ka dhan ah Soomaalida oo ka dhacay London
London (Caasimada Online) – Booliska Magaalada London, ayaa sheegay in tiro dad ah oo ka soo baxay Salaada Taajudka in gaari lagu jiirsiiyay meel aanan ka fogeyn masaajidkii ay ku cibaadeysanayeen oo ay ka soo baxeen.
Muslimiintani oo ay ku jiraan Soomaali dhowr ah ayaa kasoo baxay masaajidka weyn ee ku yaal wadada Seven Sisters Road ee nawaaxiga Finsbury Park, waxaana la sheegay in gaari uu dhex jiiray boqolaal dadkii masaajidka kasoo baxay.
Weerarkani gaariga loo adeegsaday ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro Soomaali ah oo xiligaa kasoo baxay Masjidka.
Guddiga Muslimiinta ee Britain ayaa sheegay in gaari si qasad ah loo jiirsiiyay dad cibaadeysanayay.
Sidoo kale, Booliska waxa ay sheegeen inuu geeriyooday hal ruux, sidoo kalena ay dhaawac yihiin tiro dad ah oo gaaraya sideed ruux, kuwaasi oo dhamaantood ahaa dadkii ka soo baxay Masaajidka.